Vietnam oo farriin u soo dirtay Farmaajo iyo Rooble - Radio Risaala: Somali News Online
Home Caalamka Vietnam oo farriin u soo dirtay Farmaajo iyo Rooble
Vietnam waxay ugu baaqday dhinacyada ku lugta leh arrimaha Soomaaliya inay xalliyaan khilaafaadka oo ay wax walba ka hormariyaan danaha qaranka si ay u xalliyaan xiisadda siyaasadeed ee taagan, ayuu yiri Danjire Pham Hai Anh, Ku -xigeenka Wakiilka Joogtada ah ee Vietnam ee Qaramada Midoobay.
Danjire Pham Hai Anh oo ka hadlayay kulanka Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay oo looga hadlayay xaaladda Soomaaliya ayaa ku nuuxnuuxsaday in dhinacyada ku lugta leh Soomaaliya looga baahan yahay inay helaan siyaabo lagu xallinayo khilaafaadka.
Waxa uu sheegay in madaxda looga baahan yahay inay dhisaan kalsoonida shacabka oo xoogga la saaro doorashada iyadoo la si waafaqsan heshiiskii la gaaray 27 -kii May.
Wuxuu caddeeyay inuu taageersan yahay doorka iyo tabarucaadka ururrada gobolka, oo ay ku jiraan Midowga Afrika (AU) iyo Urur Goboleedka IGAD (IGAD) si loo xalliyo arrimaha siyaasadeed ee khuseeya.
Previous articleXiisadda u dhexeysa Faransiiska, Australia, Mareykanka & Britain oo xoogeysatay
Next articlePuntland oo billowday qeybinta Kaararka Cod bixinta doorashooyinka